Ungabhala kanjani umthengisi othengisa kakhulu: okhiye bempumelelo | Izincwadi Zamanje
Uma ucabanga ukubhala incwadi, okufunayo ukuthi lena, uma uyibeka emakethe, abantu abaningi bayayithenga, bayifunde, bakunike umbono wabo ... Ngamafuphi, ukuthi ibe yimpumelelo. Noma kunjalo, lokhu kunzima kakhulu ukukufeza. Eqinisweni, eziningi ziphuma ngenxa yokushaywa inhlanhla, ngoba yethulwe ngesikhathi esifanele noma ngoba ibino-godfather noma unkulunkulukazi. Lokho akusho ukuthi awukwazi ukufunda ukubhala umthengisi ohamba phambili, kepha kufanele ukhumbule ukuthi, kulesi sibalo, inhlanhla nayo ibambe iqhaza.
Kulungile manje Ungabhala kanjani umthengisi ongcono kakhulu ongacabanga ngaye ukushiya umsebenzi oyisicefe futhi uzinikele ekubhalweni? Nokho, okokuqala nje kumele wazi ukuthi yiziphi izici ezinethonya lokucabanga ukuthi incwadi iyithengisa kakhulu, bese kufanele ulandele amaqhinga athile okwenza leyo ncwadi yombhali wakho ibe yinye.
1 Yini okuthengiswa kakhulu
2 Ungabhala kanjani umthengisi othengisa kakhulu: amasu amahle kakhulu
2.1 Yiba ngowangempela
2.2 Awubonakali uma ungenabo abafundi
2.3 Khuluma ngencwadi yakho ngisho nangaphambi kokuba uyiqede
2.4 Qaphela izitayela, ukhiye wokubhala othengisa kakhulu
2.5 Incwadi yakho ibhizinisi
Yini okuthengiswa kakhulu
Igama elithi umthengisi othengisa kakhulu libhekisa, uma silitolika, "ekuthengisweni okuhamba phambili." Lokho wukuthi, kugxilwe emhlabeni wokubhala, kungaba ngumsebenzi onempumelelo enkulu yokuthengisa noma oheha ukunaka komfundi kuze kube seqophelweni lokuthi abakwazi ukuwushiya kuze kube sekupheleni bese bekuncoma kuwo wonke umuntu.
Lezi zici yizo ezichaza ukuthi yini okungathengiswa kakhulu: incwadi eba yimpumelelo, lokho kunezinkulungwane zokuthengisa nokuthi wonke umuntu ukhuluma ngakho. Izibonelo zalo? Yebo, ama-Fifty Shades of Gray, The Pillars of the Earth, It, The Da Vinci Code ... Zonke zethulwe futhi ngokuzumayo zashaya kanzima, zihunyushelwa ezilimini eziningi, ziyincwadi ethengiswa kakhulu kunazo zonke amasonto, njll.
Ungabhala kanjani umthengisi othengisa kakhulu: amasu amahle kakhulu
Wonke umbhali ufuna ukuthi incwadi yakhe ithengise kakhulu. Kungenxa yokuthi bahola imali eningi ngaleyo ndlela, noma ngoba abantu abaningi bayazifunda, iqiniso ukuthi ukuthola lesi sichasiso akulula. Akunakwenzeka? Noma kunjalo. Kepha ayikho ifomula yomlingo esingakutshela ukuthi uyifinyelele.
Esingakunika khona ngamasu amaningi azosiza ukuqinisekisa ukuthi le ncwadi inamathuba amaningi okukufeza. Ilungiselelwe?
Uma ufuna ukubhala umthengisi ohamba phambili, kufanele Nikeza abafundi okuthile abangakaze bakufunde. Lokhu kuya kuba nzima ngokwengeziwe, ngoba cishe yonke into isunguliwe, kepha udinga ukucubungula indaba ngokujwayelekile futhi ucabange ukuthi izoletha luphi inani kumfundi, kungani ingahlukaniswa nezinye izincwadi.
Isibonelo, uma kunezincwadi eziningi eziphathelene nokubusa kwabesilisa, awucabangi yini ukuthi eyodwa ephathelene nokubuswa kwabesifazane ingaheha ukunakwa?
Awubonakali uma ungenabo abafundi
Abafundi bayingxenye ebaluleke kakhulu yombhali, kangangoba bayabadinga ukuze izincwadi zithengiswe futhi zifundwe. Ngaphandle kwezilaleli, azilutho. Futhi lokhu ngamanethiwekhi omphakathi akunzima ukukufeza.
Inhloso yakho kulokhu dala umphakathi wabalandeli, wabantu ohlanganyela nabo, ukuthi ubacabangele nokuthi bayakwazi okwenzayo nokuthi yini okutholayo. Ngokusobala, ngeke uyithole ngosuku olulodwa, hhayi ngezimbili noma ezintathu. Noma ezinyangeni. Kungathatha iminyaka ukwenza lokho. Futhi kufanele ungaguquguquki, ubonakale ngokusobala (ngoba lokhu kuyafunwa ngababhali, njll.).
Ngakho-ke, uma unamahloni noma ungathandi ukufakwa kubumfihlo bakho, ungakushiya lokho eceleni uma ufuna ukuphumelela futhi ubhale umthengisi othengisa kakhulu.
Khuluma ngencwadi yakho ngisho nangaphambi kokuba uyiqede
Le yinkemba esika nhlangothi zombili ngakho-ke kufanele uyiqaphele kakhulu. Imayelana nokunikeza abalandeli ama-brushstrokes mayelana nokuthi usebenza ini. Ngamanye amagama, ukuphromotha ibhuku noma lingakaqedwa okwamanje.
El inhloso ukudala ukulindelaUkuthi abafundi bafuna ukuyifunda ngokushesha okukhulu, ukuthi bathandane hhayi nencwadi kuphela, kodwa nenqubo yokudala eyenzekayo.
Futhi kungani sithi iyinkemba esika nhlangothi zombili? Hhayi-ke, ngoba nomncintiswano wakho ukhona, nalowo mbono wokuqala obukade unawo, uma unganakekeli okushoyo (futhi ushiye ulimi) bangakukopisha.
Ngakho-ke qaphela okuvezayo.
Qaphela izitayela, ukhiye wokubhala othengisa kakhulu
Lapho ubhala umthengisi othengisa kakhulu, kufanele ukukhumbule lokho uzoba nethuba elingcono lokuphumelela uma uthatha okuthile okuheha abantu abaningi, Awucabangi Isibonelo, Ukuxoxisana neVampire kwaba yimpumelelo ngoba ama-vampire, lapho incwadi iphuma, ayathakazelisa. Kuyiqiniso ukuthi ngemuva kwalokho kube nokuqhuma, kepha leyo ncwadi, ngenxa yokuvela kwayo, yakwenza kwaba nokwenzeka lokhu.
Yebo, nawe kufanele wenze okufanayo, kufanele uzame ukuthola ukuthi yini eheha abantu, nokuthi yini abafuna ukuyifunda. Futhi uthola kanjani lokho? Yebo, ungabheka uhlu lwabathengisi abakhulu, wenze izinhlolovo phakathi kwabalandeli bakho, noma wazi ngezihloko zamasiko nezemibhalo ukuthola ukuthi uthini lo mkhuba (kodwa nangesikhathi esizayo, ngoba ukubhala incwadi akwenzeki ngobusuku obubodwa. kusasa, ngaphansi uma ufuna umthengisi ohamba phambili).
Incwadi yakho ibhizinisi
Kulungile ukucabanga ukuthi incwadi iyigugu, nokuthi unikele ngakho konke ongakwenza ukuze wenze okusemandleni akho nokuthi okufunayo ukuthi uphumelele. Kepha ungalokothi ukhohlwe ukuthi ibhizinisi. Kusho ukuthini lokho? Yebo, kufanele ucabange ngekhanda. Yonke inkampani iqala ukwenza imikhiqizo ngaphandle kokwazi ngempela ukuthi izothengisa yini. Futhi kwenzeka okufanayo nakuwe.
Ngalokho, ukuba necebo kubaluleke kakhulu. Ochwepheshe batusa ukuba okungenani kube yisithupha ngaphambili. Lokho wukuthi, uqala ukucabanga ngakho konke ozokudinga, ukukhuphula, ukusabalalisa, njll. nesikhathi esiningi.
Ngempela awukwazi ukuthathwa yimizwa nokukhohlisa okufake embhalweni wakho, kufanele ucabange ukuthi iyinkampani futhi unekhanda elipholile ukufeza leyo nhloso yokubhala othengisa kakhulu.
Ngaphambi, ngesikhathi nangemva kwalokho. Njalo. Ungavumeli izincwadi zakho ziwele ekukhohlakalweni ngoba empeleni ukuthengisa okuhle kakhulu akusho ukuthi kufanele kube kwakamuva, kepha ukuthi, ngesikhathi esithile, kudonsela ukunaka okukhulu okuqala ukuthengisa.
Kungakho ukukhushulwa kubaluleke kangaka. Futhi ezimweni eziningi kushiwo ukukhishwa kwezomnotho ngendlela yezincwadi zamahhala (ephepheni naku-digital) ukuze abantu bakubukeze, bakhulume ngawe kwabezindaba, njll. Into enhle kuleli cala ukwaba isabelomali ngokuya ngamathuba akho.
Ngakho konke lokhu ngeke sikuqinisekise ngempumelelo uma ubhala umthengisi othengisa kakhulu. Kepha ungasondela ukukufeza. Ngabe unaso esinye iseluleko sokusishiya?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Ungabhala kanjani umthengisi othengisa kakhulu